Baarlamanka Puntland oo maanta ansixin doonoa guddiga doorashooyinka Puntland – Puntland Post
Posted on November 16, 2019 November 16, 2019 by News Office
Baarlamanka Puntland oo maanta ansixin doonoa guddiga doorashooyinka Puntland
Guddiga cusub ee doorashooyinka Puntland (TPEC), ayaa saaka oo Sabtiya hortegaya mudanayaasha Baarlamanka Puntland, si ay u siiyaan codka kalsoonida.
Kulanka maanta oo uu shir-guddoominayo, guddoomiyaha cusub ee Baarlamanka Cabdirashiid Yuusuf Jibriil, ayaa lagu ansixinta doona guddiga doorashooyinka, si ay u sii dardar geliyaan hawlaha horyaalla ee hirgelinta barnaamijka xisbiyada badan.
Guddiga ayaa ka hor inta aan loo qaadin codka kalsoonida, waxa ay warbixin ka hor-jeedin doonaan xildhibaannada golaha wakiilada, warbixintaasi oo ay ku soo bandhigayaan arrimaha u qabsoomay mudadii koobneyd ee ay shaqadan hayeen.
Guddiga doorashooyinka Puntland ,ayaa waxa horyaall shaqooyin muhiima oo ay kamid yihiin; diiwaan-gelinta urur-siyaasadeedyada, diiwaan-gelinta cod-bixiyaasha, xuduudaynta degmooyinka Puntland iyo qabashada doorashooyinka golayaasha degaanka.